Raad Raac News Online – NOLOSHA NUURKII UMMADDA QAYBTII 2AAD.
NOLOSHA NUURKII UMMADDA QAYBTII 2AAD.
Faarax July 27, 2015 Comments Off on NOLOSHA NUURKII UMMADDA QAYBTII 2AAD.
Marxaladii caruurnimo ee rasuulka scw.
Waxay inoo maraysay in suubanaha isagoo sideed jir ah oo xijaabtay awoowgii cabdul mudalib.
Waxaana dardaaran kula soo wareegay adeerkii abuu daalib oo saaxibul cayaal faqiir ah ahaa.
Halkaas ayaa waxaa oga bilaabatay nolol cusub hadii uu haystay awoowe uu ku garaadsaday oo aad u jeclaa oo isaga kaliya kool koolin jiray. Maanta wuxuu dareemayaa kalinimo iyo xanuunka geerida waalidkii oo uu ubaahnaa leedahay.
Wuxuu soo dhex galay ilmihii adeerkii oo dan yar ah, si kasta oo uu udareemi karay rafaadka faqriga qoyskan uu ku soo biiray, hadana adeerkii abuu daalib dhexda ayuu u xirtay inuusan wiilkan walaalkii dhalay ee ay maqaadiirtu la soo doonatay agoonimada iyo rajanimada uusan marna dareemin dhibaato,wuxuu ka soo dhoweystay caruurtiisa,si gaar ah ayuu oga warhayn jiray,kolkuu shaqo ama safar ka soo galo waxa ugu horeeya ee uu weydiiyo waxay ahaan jirtay meeyay maxamad,
Markuu nagi yahay galbihii iyo cawaysinkii gogosha loo soo dhigo ayuu ugu yeeri jiray si anfaca loo keeno ee khaaska odaga loogu suubiyay uu ula cuno.
Abuu dhaalib aad buu ujeclaaday muxamad,waxana sidii awoowgii oo kale oga muuqday astaamihii mucjisada,wuxuuna mar kasta oo lala soo hadal qaado uu oran jiray wiilkaygan kan ah wuxuu yeelan doonaa sha’ni.
Muxamad scw qaladii waa kabaxday wuxuuna markiiba laqabsaday qoyskan adeerkii,wuxuu qayb ka galay wax kasta oo kaalin ah ee kaga soo aadda shaqada qoyska,
Wuxuu raaci jiray ariga oo uu si masuuliyad ah oo ka badalan dayaca caruurta la ayniga ah uu oga soo dhalaali jiray, taas oo kasabtay in qoysas badan oo quraysh ah ay ariga udhiibtaan oo ay isna uqoraan wax uun qarash ah xil kasnimada iyo amaada ay ka arkeen aawgeed.
Waxaa kale oo la sheegaa in qoysaskaa ariga ku darsaday ay ka arki jireen ariga barako badan iyo darar caano badan.
Mucjisadan oo kale waxay dhacday intii uu sabiga ahaa ee uu la noolaa hooyadii nuujisay ee xaliima sacdiya.
Qoyska xaliimo sacdiya wuxuu ahaa qoys dan yar ah oo aan xoolo la sheego haysan.
Maaliintii uu sabigan barakaysan ku soo biiray qoyskeeda ayay aragtay barako iyo naruuro cidda ku soo burqanaysa, xoolihii oo udarara oo caafimaad iyo cayil la tiica xitaa iyadoo xilli abaar ah lagu jiro.
Dadkii dariska la ahaa ayaa cowriyi jiray arigeeda oo isu sheegay waxayna qowsaaradooda kula dardaarmi jireen inay ariga ufoofiyaan halka uu ufoofo ariga xaliimo sacdiya.
Sanadihii uu la noolaa nebi muxamad scw xaliima sacdiya way ku bulaashay oo barwaaqo ayan waligeed arag ayaa rabbi ku siiyay barakada nebi muxamad scw.
Waxaa la sheegaa inay xaliimo sacdiyo oran jirtay muxamad maanan uceliyeen reerkiisa hadaanan u cabsan lahayn isaga.
Dhowr jeer oo ay ahayd inay celiso ayay hadba ku darsan jirtay waqtiga si ay useeta dheeraysayo barakada ay ku aragtay wiilkan ay nuugsinta hooyada ugu tahay.
Inay celisana waxaa usawab ahaa dhacdadii uu rasuulka scw ugu yimi malagii inta lagday isagoo caruur la cayaaraya laabtiisa jeexay ka dibna ka soo saaray cadkii sheydaanka.
Caruurtii oo yaacaysa ayaa aqalkii xaliimo sacdiya ku soo yaacay iyaga oo ku qaylinaya maxamad nin baa qashay.
Iyada oo anfariirsan hadii ay halkii isku siidaysay ayay u tagtay wiilkii oo bad qaba oo aysan wax dhaawac ah ka muuqan marka laga soo tago beydad yar oo ay ka dareentay maalintaas ayay inta u cabsatay in wiilkan islaameed reerkeeda wax ku gaaraan go’aansatay inay reerkiisa ku celiso.
Dhab ahaantiina way ka dhabaysay oo waxay soo celisay isaga oo shan sano jir ah iyada oo ka xun oo uu qalbigeedu saanyaday jacaylkii waalidnimo ee ay uqaaday wiilkan barakaysan ee ay nuugsinta waalidka ugu noqotay.
Lasoco qaybaha dambe….. Insha allaah.
W/D: Abdullahi Mohamed Hussein (Abdullahi Gelinsoon)